Ọrụ anyị: Otu ndị na-eme ihe mgbaka na-eto eto - Bromley, Lewisham & Greenwich Mind
Ị nọ ebe a: Mbido > Mbido > Ọrụ anyị: Ndị na-eme ihe mgbaka na-eto eto
Ọrụ anyị: Ndị na-eme ihe mgbaka na-eto eto
Na nke mbụ nke usoro ọhụrụ, anyị na-egosipụta ọrụ nke ọrụ BLG Mind dị iche iche, na mmetụta ha nwere na ndị na-eji ha.
Anyị na-amalite site na otu ndị na-eme ihe mgbaka na-eto eto. Ọrụ a, nke ewepụtara n'ihu ọha n'August 2021 na-eso onye ọkwọ ụgbọ elu na-aga nke ọma, ezubere maka ndị nwere nkwarụ mmalite (ndị na-enweta nchoputa afọ 65 ma ọ bụ n'okpuru) yana ndị enyi na ezinụlọ na-elekọta ha.
Otu a na-enye nkwado na ihe omume ndị ọgbọ, yana ohere itinye aka n'ịmata ihe ndị metụtara mgbaka nwata na-eto eto.
Ndị YODA na-anụ ụtọ nnọkọ bọọlụ.
BLG Mind's MindCare Young Onset Dementia Activists otu a kọwawo n'ụzọ dị iche iche dị ka "ndị na-agbanwe ndụ", "ihe ịtụnanya" na "dị ka itinye akwa mkpuchi na-ekpo ọkụ gburugburu gị".
Otu a pụtara n'ụzọ doro anya ihe dị ukwuu nye ndị sonyere ya, bụ ndị ejiri okwu mkpọ okwu ha YODA mara nke ọma, yana ndị na-elekọta ha.
"Ịbịa n'òtù ahụ dị ka itinye akwa mkpuchi na-ekpo ọkụ gburugburu gị."
Otu a malitere ndụ na Mee 2021 mgbe onye njikwa ọrụ Bromley Dementia Saira Addison tụpụtara ka e mepụta ọrụ gbadoro anya na ndị nwere nkụda mmụọ na-eto eto.
Saira kwuru, sị: “Ọtụtụ ọrụ dementia bụ maka ndị agadi, yabụ enweghị ike inye ụdị nkwado nke ndị na-eto eto nwere mgbaka chọrọ.
"Tupu anyị guzobe YODA, anyị nwere ndị dị afọ iri anọ na-enweta ọrụ mgbaka MindCare, enwere m mmetụta siri ike na anyị kwesịrị ịmepụta ihe nwere ike inye nkwado gburugburu nsogbu ndị na-eto eto nwere ike iche ihu, dị ka ọrụ na mmekọrịta ha na ha. umuaka. Anyị chọkwara ime ihe omume ndị a na-achọsi ike maka ndị na-eto eto na-emega ahụ́ karị.”
YODA ghere oghe nye onye ọ bụla nwere nkwarụ mmalite mmalite na Bromley, Lewisham na Greenwich, yana ndị enyi ma ọ bụ ndị ezinụlọ na-elekọta ha. Ndị mmadụ na-eji ya chepụtara ọrụ ahụ: site na mmalite, ndị YODA na-etinye aka na ụdị ọrụ ahụ, Saira na ndị otu ya na-emepụta ya gburugburu ntinye ha.
Kemgbe e guzobere otu ahụ, ndị YODA, ndị dị ugbu a dị 16, esonyela n'ihe niile site na bowling ruo ịgba egwu Bollywood, na izute obere ịnyịnya ruo n'ịtụle achịcha, mash na mmanya kacha mma n'ime M25. Ha anụrịla tii ehihie na ogbo na kpakpando ihuenyo Mark Gatiss na họtel Langham nke London.
Ọ bụ ezie na isi ihe na-elekwasị anya na ọrụ ahụ bụ ihe na-atọ ụtọ, nanị omume ịhapụ nchekwa nke ụlọ iji gaa otu nwere ike bụrụ ihe dị mma maka ọdịmma uche nke ndị sonyere ya. Ndị nwere nkụda mmụọ na-eto eto nwere ike ịnọpụ iche na ọha mmadụ, nke nwere ike ibute mbelata ahụike uche na anụ ahụ ha. Nnyocha egosiwo na itinye aka na mmemme ọhụrụ nwere ike ịba uru dị ukwuu maka ma onye nwere ọnọdụ ahụ na ndị ha hụrụ n'anya.
Saira kwuru, sị: "Ịbanye na mmemme na ịkwanye onwe ha ime ihe ọhụrụ na-eme ka ndị YODA nwee mmetụta nke itinye aka, ùgwù onwe onye, ​​nzube na ọṅụ. Ọ na-akwalitekwa ha n’ụzọ mmetụta uche, yana ndị ha hụrụ n’anya na-eso ha.”
Otu n'ime ihe omume dị otú ahụ bụ njem otu ahụ mere na nso nso a na Essex iji lelee ihe ụtọ nke ụlọ ahịa Sainsy's Pie na Mash (nke e sere n'okpuru).
Saira kwuru, "Njem ahụ siri ezigbo ike nye ndị YODA n'ihi na o were ha ogologo oge pụọ na mpaghara ntụsara ahụ ha dị na Bromley." Ozugbo etinyere ya na Sainsy's, otu ahụ nwere obi ụtọ ịmata na onye nwe ụlọ oriri na ọṅụṅụ ahụ, Danny Sains, na nwunye ya Carlene bụ di na nwunye mbụ lụrụ na Selfridges na London mgbe ha nwetasịrị akwụkwọ ikike ebe agbamakwụkwọ.
“Danny nwere nnọọ obi ụtọ, ndị YODA nwekwara mmasị ịnụ na ya na Carlene mere akụkọ ihe mere eme mgbe ha lụrụ na Selfridges. O mere ụbọchị pụrụ iche ọbụna karị,” Saira chetara.
Otu a na-agbakwa mbọ ka a mara ihe gbasara mgbaka nwata na-amalite. Ha na Ellie Reeves, MP maka Lewisham West na Penge ga-ezute n'afọ ọhụrụ, ma nye aka na mpempe akwụkwọ gbasara ọnọdụ Oxleas NHS Foundation Trust mepụtara.
Yabụ na ndị YODA na-enwe mmetụta maka otu ha na n'agbanyeghị ibi ndụ nwere ọnọdụ na-agbanwe ndụ ha mere njem nkwado 5km na nso nso a na gburugburu Beckenham Place Park. Nke a bụ ihu ọma maka ọrụ ahụ nke onyinye gafegoro ebumnuche £2,500 iji ruo ihe karịrị £5,000.
N'ụzọ doro anya, YODA bụ ikike dị nnọọ mma ná ndụ ndị òtù ya, bụ́ ndị na-ezukọta mgbe nile dị ka ndị enyi na-anọghị n'usoro ihe omume nzukọ nke otu ahụ kwa izu.
Beverly, onye di ya bụ́ Kevin bi na-eto eto nhụsianya mmalite, eleghị anya na-ekwu maka ndị òtù niile mgbe ọ chịkọtara ihe YODA pụtara nye ya.
O kwuru, sị: “Apụghị m ịgwa gị ihe dị iche ọ mere. “Ozugbo ị chọpụtara na achọpụtara gị, ọ na-adị gị ka ị nọ naanị gị, ma n’ihi otu ahụ, anyị ahụla ụfọdụ ndị dị ịtụnanya anyị na-agaghị ahụ ma ọ bụghị ya, anyị niile na-akwadokwa ibe anyị.
"Enweghị ọrụ a, anyị gaara alụ ọgụ kwa ụbọchị n'enweghị ọṅụ na ndụ anyị."
Ndị YODA na-efe efe dị elu na ụlọ ọrụ nka nka
Ụlọ ihe nkiri YODA
Pịa na onyonyo a ka ịgbasawanye.
Otu MindCare Young Onset Dementia Activists (YODA) ghere oghe nye onye ọ bụla nọ na Bromley, Lewisham na Greenwich bụ onye mepụtara dementia tupu afọ 65, yana ezinụlọ ma ọ bụ ndị enyi na-elekọta ha. Chọpụta ihe.
Akụkọ ndị na-eme ihe nkiri Dementia mmalite
Ndị na-eto eto Dementia Activists na-ebuli £5,000 maka otu ha
Ndị na-eto eto Dementia Activists na-enwe tii ehihie na kpakpando Sherlock